Afkee Ayay Xukuumadda Iyo Guurtidu Ku Hadli Doonaa Kadib Afgebiga Ay Ku Sameeyeen Komishanka, Xisbiyada Iyo Guud Ahaanba Nidaamkii Dalka | Somaliland.Org
March 30, 2009	Weriyaha Haatuf Ee Boorama Maxamed C. Sheekh
Wax badan ayaa dad badani odhan jireen xisbiyada mucaaradku ha daayaan hadalada dhaliilaha xukuumadda, wax badan ayaa shacabka la lahaa KULMIYE yaanu nabadgelyada xumaynin ee iska jira, wax badan ayaa shacabka lagu lahaa komishankaa doorashooyinka masuul ka ah oo dibna u dhigi, horena u dhigi kara, wax badan ayey dawladdu ku doodaysay inaanay masuul ka ahayn dib u dhigista doorashooyinka, golayaasha qarankuna kama hadli karaan, waxaas oo dhan maxaa ka dambeeyey?.
Calaamadaha xukuumadaha Digtaytarka ah ee jiritaankeedu ku xidhan yahay ciidamo ay u adeegsato dhacbiga, Suxufiyiin la xidhxidho iyo mudaharaadyo nabadgelyo ah oo laga horjoogsado shacbiga, ku takrifalka dhaqaalaha dalka oo lagu bixyo arrimaha siyaasadda iyo nabad sugidda ayaa dhamaan waxay dhalaan masiirka ugu xun ee ay galabsadaan ragga dal si dimuqraadi ah loogu doortay xilka ay dhabarka u jeediyaan sharciga dalka iyo nabadgelyada.
Horaa loo ogaa in xukuumadda Rayaale aanay dalkan marnaba gaadhsiinayn horumar iska dhaaf horumar’e waxa Maanta khatar ku jirta nabadgelyadii xukuumadda ka dhaxashay marxuumiintii dalka xoreeyey iyo kuwii Rayaale ka horeeyey.
Maanta waxan maraynaa in shacbiga lagu handado qori la yidhaa car juuq dhaha, la yidhaa car wax doorta, xoog lacag lagaga qaato, xisaabna loo diido.
shacbiga Somaliland ma garan waayin inay jid kasta u maraan xuquuqdooda, caddaaladooda iyo horumarkooda laakiin waxay dhawrayaan wax aanay dhawrin xukumadda maanta dalka ay u dhiibteen ee diiddan in sidii kursiga lagu keenay ay uga kacdo.
Waxay reer Somaliland saddex jeer xilka u kordhiyaan Rayaale, taasina ay maanta marayso in shantii sannadood ee xilka loo doortay ay maanta sideed sano ka dhigato, welina doonayso si fuleynimo ah ku doonaysa in shan sannadood oo kale la doorto, muddada ay xilka haysana noqdo ku dhawaad 14 sannadood.
In aanay doorashooyin ku guulaysanayn xukuumadda Rayaale waxa daliil u ah sida fooshaxun ee ay u adeegsanayso hantida dalka iyo ciidamada aad mooddo inay nin u shaqaynayaan, shacabkana ku laynaya hubkii lagu soo iibiyey hantida shicibka.
Ka hadli mayno wax kasta oo dalka ka dhacaya wakhtigan, waxaanse xusaynaa oo keliya beenta fashilantay ee ay shicibka u sheegaysay markii doorashooyinka dalka ka dhici lahaa ay laba jeer dib u dhigtay, aakhirataankiina ka dhigtay in 31-ka May tahay maalinta la qaban doono.
Tii maanta waa la isla soo dhaafay waxay xukuumadda iyo afar oday oo toobadda ku seegaya caddaalad darro iyo qabyaalad, shalay mar kale ku dhawaaqeen arrin kale oo cid kastoo Somaliland rajo ka lahayd ka naxdo, kagana quustaan nidaamka maanta jira, iyagoo isku qabqabsaday muddo kordhin aan sharciga dalka meellana kaga ool oo ay jeebkooda kagala soo baxeen, iyagoo sheegay inay xukuumadda Rayaale u kordhiyeen lix bilood oo ka bilaabanta bisha May ee muranku ka taagnaa.
Somaliland waxay noqotay odayaal hawlgab ah, culimo kitaabkii tuurtay dhaartoodiina been ka sheegay iyo dad aan mustaqbalka ka lahayn jiilka soo socda kuwaas oo nin u shaqeeya isla markaana ay kala qaybisay qabyaalad, danaysi iyo musuqmaasuq, isla markaana sii fogeynaya xumaan kusii xoogeysata shacbiga dhexdiisa, balse laga yaabo inay aakhirataanka ku soo rogmato cidda wadda gardaradaa.
Waxa maanta la karaama tiray komishankii, xukuumaddii iyo xisbgeeda UDUB lahaayeen isaga dalka u muddayn kara doorashooyin, komishanka iyo interpeace baa goyn kara iyo cudurdaaro kale oo gebi ahaanba saldhig looga dhigay in komishanku furfuri karo, taasina maanta way dhammaatay komishan talo hayay majiree waxa dalka xukuma kooxdaasi maanta aan la ogeyn wax ay dadka u sheegi doonaan.
Si kastaba ha ahaatee waxay arrini u taalla xisbiyada mucaaradka iyo cid kastoo jecel jiritaanka Somaliland, lamana garanayo afka ay xukuumaddii odhan jirtay komishankaa doorashooyinka xukuma iyo waxyaalo kale oo ilaa maanta caalamku la yaaban yahay waxa ka dambeeyey ee ay sameeyeen odayaashii waa ahaan jiray kuwii ugu qiimaha badnaa Somalia dalkii la odhan jiray, isla markaana uu xukumi jiray sheekh Ibraahim sh. madar, balse maanta oo uu golahan xukumo Saleebaan Gaal, waxa ka muuqdaa maaha mid if iyo aakhiraba wax u taraya cidda ka talisa.